ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် အချို့ 
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ကိုယ်ရေးရာဇ၀င် အချို့ 
Aung San was born to U Pha,alawyer, and his wife, Daw Suu, in Natmauk, Magway District, in central Burma on 13 February 1915.
၁၉၁၅ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၃ ရက်နေ့တွင် မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း၊ မကွေးတိုင်း နတ်မောက်မြို့၌ ရှေ့နေ ဦးဖာ နှင့် ဒေါ်စု တို့က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို မွေးဖွားခဲ့ပါသည်။
Aung San received his primary education ataBuddhist monastic school in Natmauk, and secondary education at Yenangyaung High School.
မူလတန်းပညာကို နတ်မောက်ရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် သင်ယူဆည်းပူးခဲ့ပြီး အထက်တန်းပညာကို ရေနံချောင်း အမျိုးသားကျောင်းတွင် ဆက်လက် သင်ယူခဲ့ပါသည်။
He went to Rangoon University (now the University of Yangon) and receivedaB.A. degree in English Literature, Modern History, and Political Science in 1938.
၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် အင်္ဂလိပ်စာပေ၊ ခေတ်သစ်သမိုင်း နှင့် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံ တို့ဖြင့် ဘီအေ ဘွဲ့ကို ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှ ရရှိခဲ့ပါသည်။
ဇာတာပါအမည် - ထိန်လင်း (မိဘများက အစ်ကိုဖြစ်သူ အောင်သန်းနှင့်လိုက်ရန် အောင်ဆန်းဟု ခေါ်ခဲ့သည်)
ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်အမည် - သခင်အောင်ဆန်း
ရဲဘော်သုံးကျိပ်ဝင် အမည် - ဗိုလ်တေဇ
ဂျပန်အမည် - အိုမိုဒါမွန်ဂျိ
တရုပ်အမည် - ထန်လုရှို
တော်လှန်ရေးကာလ လျှို့ဝှက်အမည် - မျိုးအောင်၊ ဦးနောင်ချို
ဗိုလ်နေဝင်းနှင့်ဆက်သွယ်သောအမည် - ကိုစက်ဖေ
He matriculated in the “A” category with distinctions in Burmese and Pali.
၁၉၃၂ ခုနှတွက် တက္ကသိုလ်ဝင် စာမေးပွဲ၌ မြန်မာစာ၊ ပါဠိဘာသာ ဂုဏ်ထူးများဖြင့် “အေ” အဆင့်မှ အောင်မြင်ခဲ့သည်။
Aung San quickly becameastudent leader after he entered Rangoon University.
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် တက်ရောက် ပညာသင်ကြား၍ မကြာမီပင် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် တစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
He was elected to the executive committee of the Rangoon University Students' Union (RUSU). He then became editor of their magazine Oway (Peacock's Call).
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၏ အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးအဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး ၎င်းအဖွဲ့မှ ထုတ်ဝေသော အိုးဝေမဂ္ဂဇင်း၏ အယ်ဒီတာ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
He was threatened with expulsion from the university, along with U Nu, for refusing to reveal the name of the author of the article Hell Hound At Large, which criticizedasenior University official.
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဖော်ဖော်ဝါရီလတွင် “ငရဲခွေးကြီး လွတ်နေပြီ” ဟူသည့် တက္ကသိုလ်အရာရှိ အုပ်ချုပ်ရေး အရာရှိကြီးတစ်ဦးအာ ရည်ညွှန်းထားသည့် ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါးရှင်အား ဖော်ထုတ်ရန် တောင်းဆိုသည်ကို ငြင်းဆိုခြင်းကြောင့် ကိုနု(နောင်တွင် သခင်နု) နှင့်အတူ တက္ကသိုလ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ (ကိုနု ကျောင်းထုတ်ခံရခြင်းမှာ ကျောင်းအုပ်ကြီးအား ပစ်ပစ်ခါခါ ဝေဖန်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်)
This led to the Second University Students' Strike and the university authorities subsequently retracted their expulsion orders.
အဆိုပါကိုစ္စများသည် ဒုတိယအကြိမ် ကျောင်းသားသပိတ်ကို ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ယင်းနောက်ပိုင်းတွင် တက္ကသိုလ်မှ ထုတ်ပယ်သည့် အမိန့်ကိုလည်း ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခဲ့ရသည်။
Aung San was elected president of both the Rangoon University Student Union (RUSU) and the All-Burma Students Union (ABSU), formed after the strike spread to Mandalay.
၁၉၃၈ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ နှင့် ကျောင်းသားသပိတ် မန္တလေးသို့ ကူးစက်ပြီးနောက် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ (၂) ရပ်လုံးတွင် ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
In the same year, the government appointed him asastudent representative on the Rangoon University Act Amendment Committee.
ထိုနှစ်မှာပင် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် အက်ဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေးကော်မတီ တွင် ကျောင်းသားကိုယ်စားလှယ် အဖြစ် အစိုးရက ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Aung San left his law classes and entered national politics. At this point, he was anti-British, and staunchly anti-imperialist.
၁၉၃၈ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ တွင် တက်ရောက်နေသော ဥပဒေဘွဲ့သင်တန်းကို ထားခဲ့ကာ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးကို ကူးပြောင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်က ဗိုလ်ချုပ်သည် ဗြိတိသျှဆန့်ကျင်ရေးသမား၊ ယုံကြည်ချက် ပြင်းထန်သော နယ်ချဲ့ဆန့်ကျင်ရေးသမား ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။
He becameaThakin (lord or master –apolitically motivated title that proclaimed that the Burmese people were the true masters of their country, not the colonial rulers who had usurped the title for their exclusive use) when he joined the Dobama Asiayone (Our Burma Union), and acted as their general secretary until August 1940.
ဒို့ဗမာအစည်အရုံးဝင် တစ်ဦးဖြစ်လာသောအခါတွင် သခင်တစ်ဦး (မြန်မာလူမျိုးများသည် မြန်မာပြည်၏ သခင် အစစ်များဖြစ်သည်၊ ကိုလိုနီ နယ်ချဲ့များက မတရားသိမ်းပိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်) ဖြစ်လာခဲ့ကာ ၁၉၄ဝ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ အထိ ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး၏ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
While in this role, he helped organizeaseries of countrywide strikes that became known as ME 1300 Revolution, named after the Burmese calendar year.
ထိုသို့ ဆောင်ရွက်နေစဉ် ကာလအတွင်း ၁၃ဝဝ ပြည့်အရေးတော်ပုံ ( မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃ဝဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဖြစ်ပွားသည်ကို အစွဲပြု၍ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်သည်) တွင် နိုင်ငံတဝန်းသပိတ်ပွဲများကို စုစည်း ဦးဆောင်ခဲ့ပါသည်။
He also helped found another nationalist organization, the Freedom Bloc ( Bama-htwet-yat Gaing), by forming an alliance between the Dobama, the ABSU, politically active monks and Dr Ba Maw's Sinyètha (Poor Man's) Party, and became its general secretary.
အခြားသော အမျိုးသားရေး အဖွဲ့တစ်ခု ဖြစ်သည့် ဗမာထွက်ရပ်ဂိုဏ်းကြီး ထူထောင်ရာတွင်လည်း ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၎င်း အဖွဲကြီးသည် ဒို့ဗမာအစည်းအရုံး၊ မြန်နိုင်ငံလုံဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂ၊ နိုင်ငံရေးနိုးကြားသော ရဟန်းတော်များ၊ ဒေါက်တာဘမော်၏ ဆင်းရဲသားပါတီ တိုဖြင့် မဟာမိတ်ပြုထားခြင်းဖြစ်ပြီး ယင်းမဟာမိတ် အဖွဲ့၏ အတွင်းရေးမှူး ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
What remains relatively unknown is the fact that he also becameafounder member and first secretary-general of the Communist Party of Burma (CPB) in August 1939. Shortly afterwards he co-founded the People's Revolutionary Party, renamed the Socialist Party after the Second World War.
၁၉၃၉ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လတွင် ဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီကို ထူထောင်ခဲ့သူ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်နှင့် အဆိုပါအဖွဲ့တွင် ပထမဆုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဖြစ်ခဲ့သည်မှာ သိပ်ပြီးမထင်ရှားခဲ့ပါ။ များမကြာမီ ကာလတွင် ပြည်သူ့တော်လှန်ရေးပါတီ ကို ထူထောင်ရာတွင် ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးနောက်ပိုင်း တွင် ယင်းအဖွဲ့ကို ဆိုရှယ်လစ်ပါတီ ဟုပြန်လည်အမည်ပေးခဲ့သည်။
He attended the Indian National Congress Assembly in Ramgarh, India. However, the government issuedawarrant for his arrest due to Thakin attempts to organizearevolt against the British and he had to flee Burma.
၁၉၄ဝ ခုနှစ်၊ မတ်လတွင် အန္ဒိယနိုင်ငံ ရမ်ဂါတွင် ကျင်းပသော အန္ဒိယအမျိုးသားလွှတ်တော်စည်းဝေပွဲသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဗြိတိသျှအစိုးရကို သခင်တို့က တော်လှန်ပုန်ကန်ရန်ကြိုးပမ်းအာထုတ်မှုဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ဖမ်ဝရမ်း ထုတ်ပြန်လိုက်သည့်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြေးခဲ့ရသည်။
He went first to China, seeking assistance from the nationalist government of the Kuomintang, but he was intercepted by the Japanese military occupiers in Amoy, and was convinced by them to go to Japan instead.
ပထမတွင် တရုတ်ပြည်သို့သွားရောက်ကာ ကွန်မြူနစ်များထံမှ အကူအညီ ရယူရန် ရည်ရွည်သော်လည်း ဂျပန်စစ်တပ်က အမွိုင်မြို့တွင် ကြားဖြတ်တားဆီးကာ ဂျပန်ပြည်သို့သာသွားရန် တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
While he was War Minister in 1942, Aung San met and married Khin Kyi, and around the same time her sister met and married Thakin Than Tun, the Communist leader.
၁၉၄၂ ခုနှစ်တွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလတွင် ဒေါ်ခင်ကြည်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပါသည်။
Aung San and Khin Kyi had three children. ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်ခင်ကြည်တို့တွင် သားသမီး (၃) ယောက်ထွန်းကားခဲ့သည်။
Their youngest surviving child, Aung San Suu Kyi, isaNobel Peace Prize laureate and leader of the Burmese Opposition, the National League for Democracy (NLD).
အက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ သား၊ သမီးများမှ သမီးထွေးဖြစ်သူ အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ငြီမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ အတိုက်အခံ နိုင်ငံရေးပါတီဖြစ်သော အမျိုးသာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါသည်။
Their second son, Aung San Lin, died at age eight, when he drowned in an ornamental lake in the grounds of the house.
ဒုတိယသားဖြစ်သော အောင်ဆန်းလင်မှာ ၈နှစ်သားအရွယ်တွင် ရေနစ်သေဆုံးခဲ့ပါသည်။
The elder, Aung San Oo, is an engineer working in the United States.
အကြီးဆုံးဖြစ်သူ အောင်ဆန်းဦးသည် အင်ဂျင်နီယာ တစ်ယောက်အဖြစ် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ရှိနေပါသည်။
Their youngest daughter, Aung San Chit, born in September 1946, died on 26th sep 1946
သမီးထွေးဖြစ်သူ အောင်ဆန်းချစ်ကို ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလတွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့တွင် ဆုံးသွားခဲ့ပါသည်။
Aung San's wife Daw Khin Kyi died on 27 December 1988.
ဇနီးဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်ကြည်သည် ၁၉၈၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့ပါသည်။
၁၉၄၇ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အတွင်းဝန်များရုံး၌ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့်တကွ အာဇာနည် ၉ ဦး တို့သည် လုပ်ကြံခံခဲ့ရပါသည်။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 9:36 AM